अविष्मरणीय नेता मनमोहन अधिकारी – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख १३ गते ४:०१ मा प्रकाशित
कोत पर्वपछि स्थापाना भएको राणा शासन १०४ वर्षसम्म निरंकुश रूपमा चल्यो । त्यसबेला नागरिकलाई कुनै पनि स्वतन्त्रता थिएन । राजनीतिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा पूर्ण बन्देज थियो । शिक्षाको महत्त्व बुझेका परिवारका सदस्य शिक्षा आर्जन गर्न भार तिर जाने गर्थे । भारतीय जनताले अंग्रेज शासनविरुद्ध स्वतन्त्रताका लागि गरेको आन्दोलनको प्रभाव त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली युवामा पनि पर्‍यो । त्यसैमध्येका एक हुनुहुन्थ्यो मनमोहन अधिकारी । फलस्वरूप वि.सं. १९९९को ‘भारत छोड’ आन्दोलनमा भाग लिएकै कारण उहाँ पहिलोपल्ट अंग्रेजद्वारा पक्राउ परी भारतीय जेलमा पर्नुभयो । जेलमा भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूसँगको सम्पर्कका कारण उहाँ कम्युनिस्ट विचारधारासँग आवद्ध हुनुभयो । डेढवर्ष बसी मुक्तिपश्चात् पाँच वर्षजति भारतकै विभिन्न क्षेत्रमा रही काम गर्नुभयो । अनि नेपालमै आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने लक्ष्य बोकेर विराटनगर कटन मिल्समा केमिस्टको नोकरी गर्न थाल्नुभयो । भारतीय स्तवतन्त्रता संग्रामबाट आफ्नो राजनीतिक जीवनको आरम्भ गर्नु भएका मनमोहनले २००३ सालमा विराटनगरमा भएको मजदुर आन्दोलनको ऐतिहासिक नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । मजदुर आन्दोलनकै सिलसिलमा मनमोहन तीन वर्ष जेल पर्नुभयो ।
वि.सं.०४६ मा भएको जनआन्दोलनको पहिलो दिनमा नै पक्राउ परी आन्दोलन सफल भएपछि चैत्र २६ गते रातिमात्र छोडिएको थियो । समयको माग र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा गुट र उपगुटमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले आपसी एकताको लागि प्रयासहरू गर्न थाले । एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनेमा शक्तिशाली हुने र देशमा राजनीतिक स्थिरता आउने भएकोले ०४६ को सफल जनआन्दोलनपश्चात् ०४६ पौष २२ गते अधिकारीले नेतृत्व गर्नु भएको नेकपा(माक्र्सवादी) र मदन भण्डारीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा(माले) एकीकृत भई नेकपा(एमाले) गठन भयो । एकतापछि बनेको पार्टीको अध्यक्ष पदमा उहाँ नै सर्वसम्मतले छानिनुभयो । त्यसैगरी ०४९ मा भएको नेकपा
(एमाले) को पाँचौँ महाधिवेशनमा पुन:अध्यक्ष पदमा नै चयन हुनुभयो । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापश्चात् २०५ सिटका लागि भएको आम निर्वाचनमा एमाले पार्टीले ६९ सिटमा विजय हासिल गरी उहाँलाई संसद्मा प्रतिपक्षी दलको नेतामा चयन गर्‍यो ।
मनमोहन पार्टीको नेता होइन सिंगो मुलुकको अभिभावक हुनुभएको थियो । त्यो मनमोहनको मायाले गर्दा होइन जनभावनाअनुसारको काम गर्नुभएका कारण थियो । मनमोहनपछि पनि एमालेले दुईदुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो तर किन जनताले त्यस किसिमको अनुभूति गर्न पाएनन् ? मनमोहनले नौ महिने शासन गरेर एमाले पार्टीको छवि उचो पार्नुभएको छ । त्यसैलाई देखाएर राजनीति गर्न सजिलो भएकै कारण आजसम्म उहाँको नाम लिइँदै छ । उहाँले हामीबाट बिदा लिनुभएको पनि आज १४ वर्ष भएको छ । यही १४ आँै स्मृति दिवसका अवसरमा आदरयणीय कमरेड मनमोहन अधिकारीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ।